Ekwela ka Stats mee ka ị daa - Ọrụ Nlekọta Ọrịa | Martech Zone
Ekwela ka Stats mee ka ị daa - Ọrụ Nlekọta Ọrịa
Thursday, August 25, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Gụọla na blọọgụ a na ịre ahịa n'ịntanetị bụ egwuregwu ọkụ. Ọ bụ ezie na ahịrị ndị ahụ na-adịkarị mgbe ọ bịara ịrụsi ọrụ ike na usoro ndị raara onwe ha nye, a ka nwere nnukwu nloghachi na usoro nkwalite nje virus. Inwe otu ọdịnaya na blọọgụ gị ma ọ bụ saịtị ruru ọtụtụ mmadụ anaghị emebi mbibi ma mechaa pụọ, ị ga-ahụ na pasent nke okporo ụzọ ahụ dị mkpa ma ga-eme ruo gburugburu.
N'okwu a, anyị nwere otu Infographic na ọdịda peeji nke gbapụ na StumbleUpon ihe dị ka otu ọnwa gara aga - ị nwere ike ịhụ ọgọ dị n'okpuru. Mmetụta na-esote na ọnụ ọgụgụ zuru ezu bụ ihe a na-ahụ anya - bounce rates mụbara, njikọ aka mgbada, na peeji nke kwa nleta mgbada budata n'oge ọgọ.
Otú ọ dị, ihe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-amaghị bụ na mmetụta nke nkwalite nje virus dị ka nke a na-enye gị nzọụkwụ dị ịrịba ama na ntinye na-esote, nleta ndị dị mkpa mgbe emesịrị. Edere m nke ahụ na Analytics eserese dị n'okpuru. The nwa akara bụ ugbu a ọnwa 3 windo na ìhè isi awọ akara bụ gara aga 3 ọnwa window machie dị ka a tụnyere.
Rịba ama mmụba nke okporo ụzọ na nọrọ.
Nke a bụ isi! Ọtụtụ ndị na-ere ahịa hụrụ n'anya ka ha na-ahụ ngwa ngwa, na-eto eto (anaghị m) echeghị na ihe ndị a na-eme n'okporo ụzọ na-eme ihe ọ bụla mana na-akpata isi ọwụwa. Agbanyeghị, ndị ahịa ndị ọzọ ghọtara nke ọma na ịgbanye n'ụba nke ndị ọbịa site na mmemme nje site na netwọkụ mmekọrịta, ma ọ bụ nkwalite dị ukwuu, ma ọ bụ ịkpọtụrụ saịtị buru ibu karị ga-eziga ahịa na njem - mana ọtụtụ n'ime ndị ọbịa ahụ ga-anọ. Na nke a, ọ na-enweta ya na a kediegwu infographic na m osụk StumbleUpon.
Ọ bụrụ n'ịnọgide na-akwalite nnukwu ọdịnaya na-ewepụta spikes dị ka nke a, ịnwere ike ịnwe oke mbagha dị egwu, ihu akwụkwọ na njikọ aka - mana ị ka ga-adị -eto eto mgbọrọgwụ gị na-ege ntị. Ndị na-ege ntị ahụ is etinye aka! Naanị ihe ọtụtụ ndị ọbịa na-abaghị uru kpuchiri stats.
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọbịa dị mkpa bụ ihe dị mma maka saịtị gị. Ekwela ka stats mee ka ị daa!
Ọdịnihu nke mmekọrịta 360 Degree Video
Womenmụ nwanyị si na RIM, Menmụ nwoke si Google
Aug 25, 2011 na 4:48 PM
Akwa post, Doug. Anyị achọpụtala otu ihe ahụ na ọdịnaya ịrịa na Slingshot SEO. Otú ahụ ka ọ dịkwa maka nnukwu mgbasa ozi anyị.